بتحصل-iyenzeka (Betahssul) / Ingxoxo yephaneli Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
« ULwandle oluMnyama kunye neAgnicion, imidlalo emibini phakathi kokufa kunye nothando
NDijonge: ISyria phakathi kwemfazwe noxolo-ingxoxo yephaneli »
Ingxoxo yephaneli ehlelwe ngumlobi waseSudan kunye nomlweli-mthetho uZeo iya kwenzeka nge-Okthobha ye-10 e-Oyoun kwindawo yeprojekthi iBetahssul. Le ngxoxo izakumodareyithwa litshantliziyo lezopolitiko uShadia Abdel-Moneim kunye negcisa elibonwayo kunye notshantliziyo uEythar Gubara kunye nombhali nomenzi wefilimu u-Ibrahim Aljrefawi, ecaleni kukaZoyo. Izithethi ezine ziya kuthetha ngemo yezentlalo nezopolitiko eSudan kunye nokuchasana neJanjaweed. Amajoni axhaswa ngurhulumente afumana udumo ngokubulawa ngokungenalusini kwabantu nabaqhankqalazi ngexesha lotshintsho olunoxolo ngo-2019. Ingxoxo izakuba ngesiNgesi.
Ngaphandle kwengxoxo yephaneli, kuyakubakho iikonsathi ezimbini ezibhiyozela icwecwe lakhe lokuqala likaZoyo: Okthobha 8 eOyoun Berlin naseOkthoba 15 ePavillon, eHannover.
*** UKUNGENA SIMAHLA,
Iminikelo ye-5 EUR emnyango iyacetyiswa
Ungawagcina amatikiti Apha.
UShadia Abdel-Moneim - Ukumodareyitha kwePaneli
UShadia Abdel-Moneim, itshantliziyo lezopolitiko, umkhuseli okhohlakeleyo wamalungelo oluntu, ngakumbi amaqela asemngciphekweni, ungomnye wabaseki bemibutho kunye namanyathelo njengamaqumrhu aphikisayo kulawulo luka-Bashir kuyo yonke iminyaka engama-30 yolawulo olwalukhohlisayo lwamaSilamsi. eSudan. Wayesebenza ngokusondeleyo kunye neqela labasetyhini kunye nolutsha kwiindawo ezinengxabano ngoxolo nobulungisa. Namhlanje, emva koqhushululu, ulwa namaqela amatshantliziyo aseSudan ngaphakathi eSudan nakwamanye amazwe ukuze afezekise iziqubulo zenguquko kunye nokuseka inyani engcono kubantu baseSudan.
Umbhali waseSudan, umyili womxholo kunye nomenzi wefilimu osekwe eJamani. Uyaqhubeka nokufunda ifilimu e-Hamburg Media School njengoMenzi wefilim obubhaliweyo.U-Ibrahim ungumsunguli weqela lenkcubeko loMsebenzi nelinye lamaqela enkcubeko asebenzayo eKhartoum. U-Ibrahim uphumelele amaxabiso ahlukeneyo emiboniso bhanyabhanya kunye namabhaso avela kwi-DDF nakwiinethiwekhi ezizimeleyo zoMzantsi Afrika, unamanqaku awahlukileyo malunga nenguquko yaseSudan, ubugcisa kunye nengqondo yenkcubeko ecociweyo kwiindawo ezininzi zosasazo zasekuhlaleni nakwamanye amazwe kunye namaphepha eendaba ezidijithali.